Imaaraatka oo Hadal Adag ka soo saaray go’aanka DF kula wareegtay lacagtii lagu qabtay Muqdisho! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Imaaraatka oo Hadal Adag ka soo saaray go’aanka DF kula wareegtay lacagtii...
Imaaraatka oo Hadal Adag ka soo saaray go’aanka DF kula wareegtay lacagtii lagu qabtay Muqdisho!
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysay go’aanka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay kula wareegtay Lacag ay lahayd Imaaraadka oo dhawaan lagu qabtay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka islamarakaana lagu baahiyay Bogga Safaaradda iyo Wakaaladda Wararka Imaaraadka ee WAM,ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka ah ay si aan wanaagsaneyn ula dhaqan tahay dadkii waday lacagtaas.
Dowladda Imaaraadka waxaa ay sheegtay in lacagtaas ay ahayd mid lagu taageerayay Ciidamada Soomaaliya iyo Tababarayaashooda,sidaas darteedna ay dowladda Federaalka ah si xusmad darro ah kula wareegtay lacagtaas.
Waxaa ay sheegeen in ay cambaareynayaan habka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ula dhaqantay dadkii la socday Diyaaradda wadday lacagta ku dhow $10 Milyan ee dollarka Mareykanka ah.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lacagtaas ku shubtay Bangiga dhexe ee Soomaaliya,waxaana Wasaaradda Amniga gudaha Soomaaliya ay sheegtay in lacagtaas baaritaan lagu sameynayo.